HomeWararka MaantaLidka Kubada Cagta : Taariikhda Kooxihii Ugu Difaaca Adkaa Ee Dunida Soo Maray
Kadib Labadii Bandhig Difaac ee kooxda Chelsea ku muquunisay Liverpool iyo Atletico Madrid, Shabakada Cadalool waxay dib u milicsanaysaa kooxihii kale ee ugu difaaca kakanaa ee dunida kubada cagta soo maray intii mudo ah’
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayay dunidu ku kala qaybsan tay qaab ciyaareedka kooxaha uu wato oo u badan dhismaha difaaca birta ah iyo xulashada ciyaaryahanada jismiga xoogan ku ciyaara.
Dadka qaar waxay aaminsan yihiin, inuu yahay nin caqli badan oo yaqaan habka uu ku ciyaarsiinayo kooxda uu markaas horjoogaha u yahay, isla markaana bedelay hanaankii ciyaaraha ee ku dhisnaa 100% nidaamka weerarka u badan. halka dadka qaar ka aaminsan yihiin In Mourinho ‘ yahay ”kharibe kubada cagta ah’ – iyagoo ku sababaynaya inuu quruxdii ka qaaday qaab ciyaareedkii kubada cagta ee isku dhiska iyo wada shaqaynta ahaa , isla markaana u rogay nidaam dhinac kaliya ku dhisan.
Si kastabase ha ahaatee, Tababare Jose Mourinho wuxuu kamid yahay tababarayaasha xiisaha u yeela tartan kasta oo ay tagaan . waxaanu kali ku yahay, inuu yahay tababaraha kaliya ee isagoo aan soo ciyaarin kubada cagta hadana mid kamid ah tababarayaasha ugu heerka sareeya caalamka aynu ku noolahay.
Wuxuu difaac ku muquuniyay tii u dambeysay Liverpool , ciyaartii ka horeysayna wuxuu 0-0 ku qabtay Atletico Madrid , iyadoo horena loo ogaa tuu baday kooxda Barcelona isagoo wata Chelsea , Inter Iyo Madridba.
Hadaba waxaynu hoos ku tixi doonaa , woxogaa faah-faahin ahna raacin doonaa , kooxihii uga horeeyey dhismaha difaaca birta ah ee dunida soo maray, maaha ciyaar ciyaar kaliya laakiin qaarkood ay tartano dhan ku dhamaysteen difaac ma liicayaal ah.
Tartankii koobka aduunka ee sanadkii 1990 kii, celceliska goolasha ee ciyaartiiba la dhaliyey wuxuu ahaa 2.21 gool ciyaar kasta – natiijadaas oo ah tii ugu hoosaysay ee taariikhda koobka aduunka ee celceliska goolasha ee ciyaar kasta –
Waxaase xiiso leh, qaabkii xulka Argentina ku gaadhay ciyaarta Finel ka isagoo celceliska goolasha uu dhaliyey uu ka yaraa 1 gool ciyaartiiba.
Afar sanno kadib markii uu koobka aduunka u qaaday mucjisadii kubada cagta aduunka ee Diego Maradona-, xulka lagu naanayso the Albiceleste wuxuu markale si layaab leh ugu dhawaaday inuu ku ceshado hanashada koobka.
Argentina, oo uu hogaaminayay difaaceeda ninkii birta ahaa ee Carlos Bilardo, ayaa waxay shabaqa dhigeen 5 gool oo kaliya 7 ciyaarood oo ay ciyaareen.
Waxay 1-0 ku dhaafeen xulka qaranka Brazil wareegii 16 ka , in kastoo ay labadii wareeg ee xigayna rigoodhayaal kaga badiyeen qaramada Yuguslavia iyo xulkii marti galliyey koobka ee Talyaaniga. Hadana waxay ku qaadatay qaranka West Germany ilaa daqiiqadii 85 aad inay dhaliyaan goolkii guusha koobka aduunka , kana dhex baxaan oo warankoodu karo difaaci Birta ahaa ee Argentina ciyaartii Finel ka koobka Aduunka oo sidaas West Germany ku qaaday.
Hal-hayska ‘Borin, Boring Arsenal.’ Ama ‘Caajis, caajis Arsenal ‘ Ayaa caan noqotay sanadadaas, walow tababare George Graham u joojin waayay, tiisuna u cadayd oo uu iska sii watay.
Graham wuxuu shookaanta u qabtay Gunners 1986 kii, hadana ilaa 1992 intii ka gaadhaysay marna ma tuurin nidaamkii weerarka ku dhisnaa ee kooxda. laakiin saddexdiisii xili ciyaareed ee u dambeeyey kooxdiisa waxa loo diwaan galliyey boqolkiiba 40 gool inay dhalinaysay guud ahaan halkii xili ciyaareedba oo markaynu barbardhigno Lixdii horyaal ee ugu horeeyey ee uu kooxda haystay ay halkii xili ciyaareedba shabaqa dhigaysay boqolkiiba 60 gool.
In kastoo aanu Graham dhadhaminin guusha horyaalnimada mudadii uu bilaabay qorshaha difaaca iyo dhexda xoogan ah ee Arsenal , wuxuuse gaadh siiyey inay noqoto kooxdii ugu horeysay ee hal mar wada qaada FA iyo League Cup sanadkii 1993.
Nidaamka iyo qaab ciyaareedkii tababare Graham ee difaaca dhagaxa ah ku dhisnaa, isagoo dhisi jiray difaac sida silsilada is barbar yaala oo ka koobnaa, Lee Dixon, Tony Adams, Steve Bould iyo Nigel Winterburn loo tix galiyo mid kamid ah qaab difaaceedkii ugu fiicnaa ee soo mara kubada cagta Ingiriiska waligeed.
Xulkii qaranka Greece ee ku guulaystay tartankii Euro 2004, waxaanu muran ku jirin inuu ahaa xulkii ugu difaaca fiicnaa, taariikhda kubada cagtana meel sare kaga qormay
Otto Rehhagel wuxuu xaqiiqsaday in xulkiisu aanu lahayn awoodii uu ku sii wadan lahaa tartanka, manuu haysan ciyaaryahano ku filan inay dhamaystiraan rajadiisa, sidaas darteed wuxuu dhinaca kale u wareejiyay qaab ciyaareedkii kooxda, isagoo u dhigay qaab difaac ku dhisan, kaasi oo u muuqday inay meel ku gaadhi karaan (ama inuun xanuujin karaan weeraryahanadii halista ahaa ee tartanka ka qayb gallayay) waxa kale oo uu qorsheeyey inuu labada baal dhigo laba weeraryahan oo kaliya, kuwaasoo ka faa’iidaynaya kubadaha ay soo celiyaan difaacu.
Kooxdii Inter ee sanadihii 1960 aad kii, waxay ahayd kooxda ugu guulaha badan ee isticmaasha qaab ciyaareedkii luqada Talyaaniga lagu odhan jiray ‘the Catenaccio style’ – oo macneheedu yahay ‘Albaabkii Qufulada badnaa’.
In lagu dedaalo in la dhaliyo goo lama laba gool oo habka tuuryada dheer ‘counterattack’ ah oo kaliya ayay ahayd ahmiyada ugu weyn ee ay ciyaarta u gallayeen, iyo in lagu jahawareeriyo weeraryahanada kooxda ka soo horjeeda difaacyahano tiro badan oo isku xeera dhinac walbana kaga yimaada marka ay kubadu lugtooda soo gasho.
Tababarihii caanka ku noqday nidaam difaaceedkaasi ee kooxda Inter oo la odhan jiray Helenio Herrera ayaa sidaas ugu qaaday naadiga Nerazzurri laba horyaal oo Yurub ah iyo saddex horyaalka Seria A Talyaaniga ah – Waxaanu isticmaali jiray difaacyahano heerkoodu aad u sareeyey oo ay kamid ahaayeen, Giacinto Facchetti, Tarcisio Burgnich iyo Armando Picchi, kuwaas oo dhamaantood ay ka baqi jireen weeraryahanadu.
Taageerayaashu waxay naanaystiisii hore ee ahayd Catenaccio ugu bedeleen mida cusub ee Watenaccio, tababare Walter Smith wuxuu qay ka ahaa dedaalkii naadiga Rangers’ ee xili ciyaareedkii 2007-08 ee horyaalada Yurub.
Lionel Messi, oo dedaal la’aan loo tirinayay ayaa laga qoray “Rangers mabay doonayn inay ciyaaraan kubada, waxay tijaabinayeen nidaamka ‘Lidka kubada cagta’ daqiiqadihii u horeeyey ee ciyaarta” kadib kulankii Champion ka ee ay Barcelona barbar dhaca gool la’aanta ah ay isla dhaafi waayeen kooxda reer Scotland ee Rangers.
Markii iyaga iyo madaafiicdoodii difaaca ahaydba laga soo reebay Champion ka ee ay ku soo biireen Uefa Cup, Smith muu joojinin nidaamkii difaaca adag ahaa ee waabu ka sii kordhiyey difaacyadii uu la shir iman jiray, waxaanay sii socdeen ilaa ciyaartii Fine ka, iyagoo dhalliyey 5 gool oo kaliya, 8 ciyaarood oo ay safteen – ciyaartii Fine kana waxan 2-0 kaga qaaday naadiga Ruushka ah ee Zenit St Petersburg.
Wuxuu gayaysiiyey in naadiga Stoke City in Rikoodh ay noqoto 116 ciyaarood Premier League ay safteen, inay mar kasta ka hooseeyeen celceliska kubad haysashada (ball position)boqolkiiba konton – 50% – hadana saas oo ay tahay aan marna looga baqan kooxdu inay u dhaadhacdo heerka labaad ee Seria B.
Tababare Tony Pulis wuxuu dhisay koox kubada sida loo celiyo ee shabaqa looga ilaaliyo takhasus sare u haysatay, Kubadaha tooska loo celinayo iyo goynta ciyaaryahanka kubada wataa waxay xaladii, dhadhankii iyo xiisihiiba ka qaadeen ciyaartii Stoke, garoonkoooda the Britannia Stadium isna waxa ku dhacay nabaad guur dhinaca dooga iyo cawska ah oo ay sababtay qaab ciyaareedka noocaas ahi.
Mudaddii shanta xili ciyaareed ahaa ee uu maamulayay tababare Pulis goolashii kooxdu dhalisay , waxay ka badan dhaliyeen Stoke , xili ciyaareedkan socda oo uu ka maqnaa kadib markii shaqada uu ka tagay xagaagii hore , kana kubad qurux badan tahay oo ka fiican tahay daawashadeedu
Uruguay Oo Rigoodhe Cavani Dhaliyey Kaga Badisa Morocco